धुर्मुस–सुन्तलीले ‘ठगी धन्दा’गरेको आरोप मान्छेहरू चकित, सम्पत्ति जफत गर्न माग – Dainik Sangalo
धुर्मुस–सुन्तलीले ‘ठगी धन्दा’गरेको आरोप मान्छेहरू चकित, सम्पत्ति जफत गर्न माग
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष १२, २०७८ समय: ११:५१:०९
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ले अरु कति पैसा संकलन गरेको छ सबै जानकारी दिनुपर्छ ।
ठूलो रंगशाला बनाउने मोहमा धुर्मुस–सुन्तलीले फाउन्डेसनलाई अगाडि ल्याएर चन्दा संकलन गर्न थाले । उनीहरूले चन्दा संकलन कति गरे खोल्नुपर्छ । फेसबुकमा लेखेको भरमा ‘धुर्मुस–सुन्तली’लाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
भरतपुरको रामपुरमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयको जमिनमाथि ‘धुर्मुस–सुन्तली’ले ठूलो खेलवाड गरेका छन् ।
अब अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा बनिरहेको क्रिकेट स्टेडियमको काम कति सकियो ? कसरी कति बनाइयो ? कस्ता सामान प्रयोग गरिएको छ ? गुणस्तर के छ ? भन्ने विषयमा कसैलाई थाहा छैन ।
यसको आर्थिक आयव्ययको लेखा परीक्षण, निर्माण पूर्वाधारको अवस्थाबारे आम मानिसलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
मिडियाबाजीको भरमा, चन्दा उठाएर धुर्मुस सुन्तलीले जे गर्न खोजे, जे भ्रम गर्न खोजे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
रंगशाला बनाउने भनेर चन्दा उठाएर काम बन्द गरेर भाग्न लागेका धुर्मुस–सुन्तलीको सम्पत्तिको छानबिन पनि हुनुपर्छ ।
चन्दा उठाएर समाजसेवा गरेको भरमा जसले जे गर्दा पनि छुट दिनु हुँदैन ।
Last Updated on: December 27th, 2021 at 11:51 am